Mkpụrụ Ihe Mpụ Na-echebe Ọhịa na Nlegharị Anya
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Uganda » Mkpụrụ Ihe Mpụ Na-echebe Ọhịa na Nlegharị Anya
News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa na Uganda • Akụkọ dị iche iche
Mkpoko Ọdachi mere nye UWA
Oghere maka ndị Refeyim, Constù Na-ahụ Maka Nchekwa Mba Nile nke na-echebe anụ ọhịa na ọdịdị ala n'Africa na-elekwasị anya na nlanarị enyí, nyere onyinye 18 mpụ mpụ ebe Ndị Uganda Wildlife Authority (UWA's) ngalaba nyocha iji nyere aka na njikwa na njikwa nke mpụ mpụ mgbe oge nyocha nke mpụ anụ ọhịa. Ngwunye ọ bụla nwere ihe dị iche iche nke 29 iji nyere aka na-ejikwa ọnọdụ mpụ.
E nyefere ihe ndị a n’aka Charles Tumwesigye, osote onye isi ọrụ Field Operations (DDFO), onye onye osote onye na-ahụ maka iwu na ụlọ ọrụ, Chemonges Sabilla, na Col. Kyangungu Allan gbara ama n’isi ụlọ ọrụ UWA. Oghere maka ndị Refeyim nọchiri anya Maazị Rod Potter, Maazị Justus Karuhanga, na Maazị Tusubira Justus.
Chemonges toro oghere maka ndị Refeyim maka nnukwu mmekọrịta nke na-ejedebeghị na onyinye a kamakwa ọzụzụ na ọtụtụ mmemme iji kwado nchedo anụ ọhịa. Maazị Karuhanga kelere UWA maka iguzosi ike na njikwa nchekwa ma gosipụta na nke a bụ mmalite nke nnukwu njem ebe nchekwa ga-apụta onye mmeri.
Na nnọchite Samuel Mwanda, onye isi Executive UWA, DDFO kelere oghere maka ndị Refeyim maka mmegharị ahụ nke si na UWA pụta ogologo oge. O kwuru na Space for Giants akwadola UWA na ego maka owuwu nke mgbidi eletriki na Queen Elizabeth Conservation Area (QECA) na Murchison Falls, isi nsogbu esemokwu anụ ọhịa ụmụ mmadụ maka Mpaghara Murchison Falls Conservation (MFCA). Ọ nabatara ha iji kwado mpaghara nyocha na ọgụgụ isi ọhụrụ ahụ. Obi dị ya ụtọ na akụrụngwa ahụ abịawo n'oge kwesịrị ekwesị ebe ọ bụ na ngalaba ahụ gara were na nso nso a zụọ ọtụtụ ndị ọrụ iji were ihe ịma aka a. COVID-19 ugboro akpatawo nsogbu n'ịchụ nta, ya mere, mkpa ọ dị ịmụrụ anya karị mmanye na igbochi mpụ nke anụ ọhịa achọrọ.